अष्ट्रेलियामा किन चुलिँदैछ ट्वाइलेट पेपरको अभाव ? - ePosttimes
Homeस्वास्थ्यअष्ट्रेलियामा किन चुलिँदैछ ट्वाइलेट पेपरको अभाव ?
अष्ट्रेलियामा किन चुलिँदैछ ट्वाइलेट पेपरको अभाव ?
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १६:१४ स्वास्थ्य, हाम्रो सरोकार 0
काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को प्रकोप अहिले विश्वभर फैलिएको छ । यो भाइरस १०० भन्दाबढी मुलुकमा फैलिएको छ भने ३६०० बढीको ज्यान गएको छ । भाइरसबाट प्रभावित बनेको एक मुलुक अष्ट्रेलिया पनि हो ।
अष्ट्रेलियामा संक्रमितको संख्या ७७ पुगेको छ भने तीन जनाको मत्यु भएको छ । भाइरसको त्राससँगै बजारमा हुनसक्ने अभावलाई ध्यानमा राख्दै मानिसहरुले उपभोग्य सामग्रीको जोहो गर्न थालेका छन् । विशेषगरी ट्वाइलेट पेपरको जोहो गर्न थालेका हुन् ।
यही कारण बजारमा ट्वाइलेट पेपरको अभाव चुलिएको छ । ट्वाइलेट पेपर किन्न मानिसहरु लामो लाइनमा बस्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन, ट्वाइलेट पेपर खरिद गर्न नपाएको झोंकमा विवाद तथा झगडा भएको पाइएको छ ।
अष्ट्रेलियाको समाचार पत्रिका एनटी न्यूजले ट्वाइलेट पेपरको अभावलाई मध्यनजर गर्दै ८ पेज खाली पाना वितरण गरेको छ । अष्ट्रेलियाको सरकारले भने मुलुकमा कुनै पनि किसिमको अभावको सम्भावना नरहेको बारम्बार बताउँदै आएको छ । तर पनि मानिसहरु ट्वाइलेट पेपरकै लागि लाइनमा बसेका छन् ।
किन फैलियो ट्वाइलेट पेपरको संकट ?
कोरोना भाइरसको अनावश्यक त्रासका कारण ट्वाइलेट पेपरको अभाव भएको अष्ट्रेलियाको न्यूजपोर्टल न्यूज डटकम डट एयू उल्लेख गरेको छ । समाचार अनुसार अष्ट्रेलियामा मागको ६० प्रतिशत ट्वाइलेट पेपर स्थानीय रुपमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले अहिले नै यसबारे डराउनुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छैन ।
तै पनि किन अभाव भयो त ? डेकिन यूनिभर्सिटीका मानव स्वfभावका विशेषज्ञ डा. पाउल ह्यारिशनका अनुसार अष्ट्रेलिया जस्तो पुँजीवादी संस्कृति भएको मुलुकमा मानिसहरु कुनै पनि समस्याको समाधान केही सामग्री खरिद गरेर गर्न चाहन्छन् । कुनै पनि संकटको समयमा निकै सजिलो उपायको खोजीमा रहने गर्छन् ।
अनुसन्धानका अनुसार मानिसले जतिबेला आफ्नो नियन्त्रण गुमाएको महसुस गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरु आफ्नो ध्यान आफूले नियन्त्रण गर्नसक्ने साना कुराहरुमा लगाउँछन् । त्यसैको उपज अहिले अष्ट्रेलियामा ट्वाइलेट पेपरको अभाव भएको ह्यारिसनको भनाइ छ । मानिसमा भाइरसको कारण अहिले त्रास बढेको छ । यस्तोमा उनीहरु ट्वाइलेट पेपर अभावमा बाँच्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरु लामो समयसम्म पुग्ने ट्वाइलेट पेपर खरिद गरिरहेका हुन् ।
पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा राजनीति र संस्थाहरुप्रति मानिसको विश्वास पनि अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । एक अध्ययनले अष्ट्रेलियामा ८० प्रतिशत मानिसहरु राजनीतिक तथा वित्त संस्थाहरुमा विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले मानिसहरु आफ्नो सुरक्षा आफैंले गर्नु निकै जरुरी रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
बीबीसीका अनुसार ट्वाइलेट पेपरको समस्या अष्ट्रेलियाको मात्र भने होइन । भाइरसले अष्ट्रेलियाभन्दा बढी प्रभाव भएका मुलुकहरु सिंगापुर, जापान र हङकङमा पनि छ । तर त्यहाँ अष्ट्रेलियामा जस्तो संकट भने देखिएको छैन । अष्ट्रेलियामा भने मानिसहरु आवश्यकता भन्दा बढी डराएको कारण यो अवस्था आएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अफवाहले पनि मानिसहरुमा त्रास सृजना गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । केहीले भने सबै अरुले उल्लेख्य मात्रामा ट्वाइलेट पेपर किनिरहेकाले आफूले पनि किन्न जरुरी महसुस गरेको बताएका छन् ।
साउथ वेल्स यूनिभर्सिटीकी प्राध्यापक नितिका ग्रेगले एसियाली मुलुकमा भने यस्तो आशंका नरहेको बताउँछिन् । उनकाअनुसार चीनमा मानिसहरु ट्वाइलेट पेपर अभाव भए टिस्यू पेपर वा अन्य केही विकल्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । त्यसैले अष्ट्रेलियामा ट्वाइलेट पेपरको अभाव हुनुपर्ने कारण छैन ।
248700cookie-checkअष्ट्रेलियामा किन चुलिँदैछ ट्वाइलेट पेपरको अभाव ?yes
कोरोनाको परीक्षण धरानमै गर्ने सरकारको निर्णय नोबेल अस्पतालमा बढ्यो बिरामीको भीड बागलुङकी ६५ वर्षीया छैठौ संक्रमित बृद्द महिला कोरोना मुक्त, डिस्चार्ज गर्ने तयारी उदयपुरमा स्थानीय युवाबाट मस्जिदका जमातीलाई कोरोना सरेको पुष्टि र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएकी युवतीको मृत्यु थप तीन जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमीत संख्या ५७ पुग्यो मध्य तराईमा संक्रमितको संख्या बढयो, पीसीआर परीक्षणमा तीब्रता कोरोनाकाे वैकल्पिक उपचार पद्धतिको बाटो खुल्यो
नोबेलद्वारा झापामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
यूएईमा दुई नेपालीलाई कोरोना संक्रमण, कतारले प्रवेशमा रोक लगायो